LAST DAY OFFER မှာ အရင်ကလိုပဲ အစဥ်အမြဲ ၁၀၀% banking နဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတိုင်းကို ပေးချေဝယ်ယူလို့ရပါတယ်။ ~ The ICT.com.mm Blog
LAST DAY OFFER မှာ အရင်ကလိုပဲ အစဥ်အမြဲ ၁၀၀% banking နဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတိုင်းကို ပေးချေဝယ်ယူလို့ရပါတယ်။
Visa, Mastercard, MPU, KBZPay, WavePay, CBPay တို့အပြင် ဘဏ်မှ ငွေလွှဲမည်ဆိုပါက AYA, CB, KBZ တို့ဖြင့် ပေးချေဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
ဒီနေ့ က ၁၃ ရက် နော် OFFER end တော့မှာ အိုင်စီတီ ချစ်ပရိတ်သက်ကြီးအတွက် အရမ်းတန်တဲ့ gadgets တွေကို လက်မလွတ်ရစေအောင် လင့်ခ်များကို စုပေးထားတယ်နော်။ နောက်ဆုံးနေ့ ဆိုတော့ အမြန် သာ Click Click and Add to Cart လိုက်တော့နော်
Lenovo IdeaPad Slim 1-14IGL05 (Intel Pentium) Platinum Gray-3
Shop here: https://bit.ly/3jY870g
Midea Tower Fan FZ10-16AR (Black) Save 10%
Shop here: https://bit.ly/2YzDjus
MAD CATZ The Authentic R.A.T. PRO X3 Gaming Mouse (Black) Save 10%
Shop here: https://bit.ly/3E7GfPa
HP Color LaserJet Pro MFP M183fw-1 Save 5%
Shop here: https://bit.ly/3zVxYLT
Philips Garment Steamer GC514/49 26% Reduction
Shop here: https://bit.ly/2X48223
Targus Groove X2 Slim Case 13-inch (Charcoal) 63% (Pay Less than Half priced)
Shop here: https://bit.ly/3jW9Djo
Xbox ONE S (White) PAY 14% LESS
Shop here: https://bit.ly/2YKefRJ
Acer Aspire Desktop XC-895 Intel UHD Graphics (i5-10th Gen) Save 6%
Shop here: https://bit.ly/3EeLE7o
East Modified Sine Wave Inverter 2400VA 30% OFF Deal
Shop here: https://bit.ly/3C2sFLl
» i/mBanking မရှိ၍ ငွေသားဖြင့် ပေးချေမည်ဆိုပါက 5% ပြန်အမ်းငွေ ရှိတာကိုလည်း မမေ့နဲ့ဦးနော်။
Happy 9.9 super sale last day shopping!
Newer Gift4HIM from ICT.com.mm 9.9 Super Sale LAST DAY!!!
Older Home Appliances Promotion Bundle by ICT’s pick Under K1,250,000